Ukusebenza kweSanex Natur Protect entsha | Amadoda aQinisekileyo
Yiba neklasi | | Ukunyamekela
Ukubeka i-deodorant kuvavanyo, elona xesha lilungileyo lisehlotyeni, apho kushushu khona, ubilo luyasikhathaza ngalo lonke ixesha kwaye ke eyona nto sihlala siyijonga kwisidambisi esihle kukuba ukongeza ekupheliseni ivumba, ayenzi loo mabala angabukekiyo akabonakali kulusu lwethu, kwaye ukuba kunokwenzeka ukuba isebenzisa izinto zendalo, konke kuya kuba ngcono.
Sifuna ukubona ukuba singafezekisa konke oku ngokutsha Sanex Natur Khusela, Isidambisi esitsha sikaSanex, esinezixhobo eyona asethi iphambili yi-alum, izimbiwa zendalo ezivela kwilitye lealuniferous elinyangayo, liyintsholongwane kwaye livumela ulusu lwethu ukuba luphefumle. Kananjalo, njengento entsha, le mveliso intsha ye-Sanex ayiqulathanga i-aluminium chlorohydrate, loo antiperspirant engavumeli ulusu lwethu luphefumle, okanye utywala, okanye iiparabens. Kwaye ungabelana neqabane lakho! Isisiyobisi esine-unisex zombini kwifomathi yayo yokutshiza kunye nokuqengqeleka.
I-Sanex isekwe kulo mthetho-siseko ubusetyenziswa ukusukela kumaxesha amandulo apho abantu babethambisa nje eli litye le-alum baligqithise ngqo phantsi kwekhwapha ukuphelisa ukubila okungathandekiyo.
Ukuvavanya ukusebenza kwemveliso sisebenzise zombini ifomathi yokuqengqeleka kunye nesitshizi kulusu oluqhelekileyo.
Into esifuna ukuyigxininisa malunga nemveliso kukuba ivumba layo alomelelanga kwaphela, ishiya ubumnandi imvakalelo yokutsha ekhwapheni lethu ngaphandle kokubangela ivumba eligqithisileyo lesiqholo. Khange sibonise ukuba ihlala iiyure ezingama-24, kuba obu bushushu kwaye kuba ehlotyeni akunakwenzeka ukuba uthathe ishawa engaphezulu kwesinye.
Ukuba ungomnye wabo bachebile amakhwapha, iyimveliso efanelekileyo, kuba iyaphilisa loo manxeba mancinci onokuwenza emva kokuthambisa, ngaphandle kokuphulukana nokusebenza kwemveliso.
Zama kwaye usixelele ngamava akho!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ukusebenza kweSanex Natur Protect entsha
Ndingathanda ukwazi ukuba le antiperspirant isusa amakhwapha, kuba ndifundile kwezinye iiblogi ukuba ilitye le-alum lisebenzela la ngxaki, ndibanabala kwaye ndikhangela imveliso yoku.
Ilitye leAlum liye laqonda iimpawu zokubulala iintsholongwane kunye neempawu zokulwa nokuqaqamba.
Ukusetyenziswa kwayo okuphambili kunjenge-deodorant yendalo. njengoko ivala pores, ilawula ukubila kwaye ithomalalisa ivumba elibi. Kuyaphilisa, kulungele ukusetyenziswa emva kokucheba, kuthambisa ulusu, kuyibulala iintsholongwane, kwaye kuthintela ukubonakala kwamanxeba, kunciphisa ukopha kwaye kususe amabala is kukonga kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa, kwanele ngokumanzisa ilitye, kwaye uligqithise kule ndawo ukuze unyangwe kuba ialum inyibilika emanzini. Siyathemba ukuba sikuncedile !!
Kudala ndisebenzisa ukukhusela i-Natur deodorant okwexeshana kwaye kuhamba kakuhle kakhulu, ngakumbi emadodeni, hehe. I-Alum ibingazi ngaphambili, kwaye kananjalo, ukuba zisusa izinto ezinobungozi, konke kungcono.
Kwaye ayibilo, iyasebenza, ubuncinci kum.
Maria José sitsho
Into endinokuyincoma yiDove Dermo Aclarant® antiperspirant, ekhethekileyo yokuqaqambisa ulusu emakhwapheni, ikwashiya ulusu lwakho lulunge kakhulu kuba iqulethe ikhrimu yokuthambisa, kwaye yenziwe ngezinto zendalo.
Mholweni!! Ewe, bendihleli ndisebenzisa iSanex Naturprotect okwethutyana, le inesigqubuthelo esipinki, kwaye ndiqhuba kakuhle… ubuncinci andibilo kwaye yile, kuba andikaze ndisebenzise i-deodorant ngaphezu Amaxesha ama-2… ndicinga njalo! Kwaye zibandakanya i-alum kwaye zisuse isithako semichiza, kubonakala kubalulekile kum.
I-crackberry, likhoboka elitsha
I-Trussardi 1911 Yonke imihla-Sebenzisa ubhaka wesikhumba